တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ပေးစာ နဲ့ ပြန်စာ
မမေ စည်ပင်က ဘာမှ မလုပ်တော့ အဲဒီလို အမှိုက်ကောက်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ရသေး သဗျ။ ဟုတ်ပါတယ် ၊ လမ်းသွားရင် ချော်လဲရင် နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကျွန်တော် လက်ရှိရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံဆို ၊ ကား မှောက်မှောက၊်စက်ဘီး မှောက်မှောက် ၊ လူ တစ်ခု ခု ဖြစ်သွားလို့ ၊ အကြောင်းအရာ စစ်ဆေးတဲ့ အခါ လမ်းမညီလို့ မှောက်သွားတယ်ဆိုရင် ၊ စည်ပင်ကို တရားစွဲ လို့ ရတယ်ဗျ.ဒီလိုသာစွဲကျေးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ စည်ပင် နေစရာ နေရာတောင် ရှိပါ့မလား မသိ။
မမေဓါဝီသုံးသပ်ပြသွားတာကောင်းပါတယ်။ ဘာသာရေးဖက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ပေါ့။ ဒါပေမယ့်ဗျာ၊ ကျွန်တော် တစ်ခါတစ်ခါ စဉ်းစားမိတာရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်က ဘာသာရေးလုပ်တယ်ဗျာ။ အဲဒီလိုဆိုရင် သူ့အတွက်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ နောင်ဘ၀မှာ သူ့ကုသိုလ်ကြောင့် ပိုပြီးအဆင်ပြေတဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ခြားလူတွေအတွက် သူဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ အမျှဝေတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါကလက်တွေ့မကျဘူး။ အမျှဝေတဲ့ အလုပ်ကို မယုံကြည်ဘူး၊ မကောင်းဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပိုပြီးလက်တွေကျတာတွေလဲ တွဲလုပ်ပေးပြီး ကုသိုလ်ယူသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ ကျွန်တော်က တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတွေ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရင်း ကုသိုလ်ယူနေတာကို အရမ်းအားကျတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ နောက်ဘ၀မှာ ငါတို့ကောင်းစားမှာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်တော့ရှိမယ်မထင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆီက လူကြီးတွေလဲ အသက်ကြီးလာရင် ဘုရားကျောင်းကန်သွားပြီး ဘာသာရေးဘက်ကို တော်တော်လုပ်ကြတယ်။ အဲဒါကောင်းပါတယ်။ ပိုကောင်းတာကတော့ ကိုယ့်နောင်ဘ၀အတွက် ဘာသာရေးလဲလုပ်သလို၊ ကိုယ်မသေခင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကို လက်တွေ့ ကူညီနိုင်တာတွေလဲ လုပ်သင့်တယ်။ လူတိုင်းတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး၊ တစ်ချို့ကတော့ ဘာသာရေးဘက်စိတ်ဝင်စားသွားပြီး တစ်ခြားဘာကိုမှ စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ ခု ကျွန်တော်တို့မြန်မာတော်တော်များများက ငါတို့တိုင်းပြည်အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေရတာ၊ ငါတို့ခုလို ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ နေနေရတာ အရင်ဘ၀ကကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးကြောင့်ဆိုပြီး ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်တဲ့စိတ်ကနေ ပျင်းကြောထူတဲ့စ်ိတ်ဖြစ်သွားမှာကိုတော့ ကျွန်တော်တစ်ကယ်စိုးရိမ်မိတယ်။ သူတို့တွေ အဲလို ကံပဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ကျေနပ်နေကြလို့လဲ ခေတ်အဆက်ဆက်က အာဏာရှင်တွေက ခြယ်လှယ်ချင်သလို ခြယ်လှယ်ခွင့်ရခဲ့ကြတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ်မျိုးဆက်တွေကို ဒီလိုဘ၀ဆိုးကြီးကနေ လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးရင်းနဲ့ ကုသိုလ်ယူကြပါလို့။
စာကြွင်း။ ။ကျွန်တော့်အတွေးသက်သက်မျဖြစ်ပါတယ်။ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပေးဖို့ ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
ဒီ လို မျှမျှတတ မြင် တတ် တဲ့သူ တွေ များ များ ရှိ ပါ စေ ဗျာ ..ကျွန် တော့ကို အ တွေး ပွား စေ တဲ
ကွန် မင့်အတွက် ကျေး ဇူး နော် ..
5/27/2007 10:24 AM
မိချောင်းမင်း ရေခင်းပြတယ်တော့ မထင်စေချင်ပါဘူးနော်။ နည်းနည်းတော့ ၀င်ပြောချင်ပါတယ်။
(အစဖော်ပေးရင် မမေ သိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဇာတ်လမ်း အကြမ်းဖျင်းကလွဲလို့ ဘယ်သူရေးတဲ့ ဘယ်သူ့အကြောင်းစတာတွေကို မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ပြန်ပြောပြပေးရင် ကျေးဇူးတင်မှာပါ။)
ရွာတစ်ရွာမှာ စာသင်ကျောင်းဆောက်ဖို့အတွက် လူကြီးတချို့ လုံးပမ်းနေကြချိန်၊
အဲဒီရွာက ငွေကြေးကြွယ်ဝတဲ့ လူချမ်းသာတစ်ယောက်က သူကြည်ညိုတဲ့ ရွာရဲ့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကို ဘုန်းကြီးကျောင်းအသစ် အလှူခံဖို့ လျှောက်ပါသတဲ့။
စာသင်ကျောင်းကိစ္စကို သိနေတဲ့ ဆရာတော်က ဘုန်းကြီးကျောင်းအစား စာသင်ကျောင်းလှူဖို့ တိုက်တွန်းပေမယ့် ဒကာတော်က ဘုန်းကြီးကျောင်းသာ အလှူခံဖို့အတင်းလျှောက်ပါသတဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ ဆရာတော်ရဲ့ (ဒကာကြီးက မလှူတတ်သေးပါဘူး) ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ဒကာကြီးက စိတ်ဆိုးလို့ တခြားကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တပါးကို ကျောင်းဆောက်လှူလိုက်ပါသတဲ့။ ဇာတ်လမ်းလေးက ဒီလောက်ပါပဲ။
နောက်ဆုံး နိဂုံးချုပ်ထားတာက (အခုနေလောက်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလူချမ်းသာကြီးတစ်ယောက် ကျောင်းဆောက်လှူတဲ့ ကုသိုလ် အကျိုးပေးပြီး နတ်ပြည်မှာ စံစားနေလောက်ရောပေါ့၊ သူနေခဲ့တဲ့ ရွာလေးမှာတော့ အခုချိန်ထိ စာသင်ကျောင်း မရှိရှာသေးပါ) တဲ့။
ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းကတော့ ငါးပါးသီလလုံဖို့ထက် Gentleman ဖြစ်ဖို့သာ ပိုအားသန်ပါသတဲ့။ တကယ်လို့များ ခုနက လူချမ်းသာကြီးသာ Gentleman စိတ်ရှိရင် သူဘာလုပ်မလဲ.....?
အဲ ခ ဏ လေး
လှူ တာ သူ လှူ ချင် တာ လှူ ပါ စေ ဗျာ
လှူ တာ နဲ့နတ် ပြည် တော့မ ရောက် ဘူး နော်
အဲဒါ တော့သ တိ ပြု
ကု သိုင်္လ အ ကျိုး ပေး ပုံ ကို မိုး ကုတ် ဆရာ တော်တို့ရှင် ဇနကာ ဘိ ၀ံသ တို့ဟော ရှာ နာ လိုက် ပါ ဦး
ရွှေ ဥ ဒေါငး ကြီး လဲ သူ့ကို ဦး ဆန်း လွင် က reply to shwe u dawn ဆို ပြီး ပြန် ချေ ထား တာ ဖတ် ကြည့်ပါ ဦး နော်
မေ ရေ မ နေ နိုင် လို့ရေး မိ တာ
ရွှေ ဥ ဒေါင်း ကို စာ ရေး ဆရာ အ နေ နဲ့လေး စား ပါ တယ် ဘာ သာ ရေး မှာ တော့ဆရာ မ တင် လနိုင် ဘူး
ဘာ သာ ရေး ရေး ဆရာ အတင် မှား ရင် အ ဇ တ သတ် ကြည့်နော်
5/28/2007 4:26 AM
ဟုတ်ကဲ့၊ လွန်သွားတာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
ကျောင်းလှူလို့ နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာ စာရေးဆရာရဲ့ အာဘော်ပါ။
(ရောက် မရောက်တော့ ကျွန်တော်တကယ် မသိတာပါဘူး။)
စာရေးဆရာကလည်း ကိုတင့်ပြောတာတွေ မသိလို့ မှားရေးတယ်လို့လည်း ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။
သူရေးနေတာက ဘာသာရေးဆောင်းပါးမဟုတ်လို့ ကျွန်တော့်လို သာမန်လူပြိန်း နားလည်အောင် ရေးသလားလို့ပဲ တွေးမိပါတယ်။
သူစေတနာကိုတော့ မြင်သာအောင်ရေးပြသွားပါတယ်။ ကိုတင့် မမြင်တာ ကျွန်တော်ညံ့လို့ပါ။
မမေ ရေးပြသွားတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဘာသာရေးဘက်ကလည်း မှန်မယ်နဲ့ တူပါတယ်။ (ကျွန်တော် တကယ်မသိပါဘူး)
ဟုတ် ကဲ့ 
ကို ကေ ဇက် ပေး ချင် တဲ့သ ဘော ကို ပ ထမ ထဲက ကျွန် တော် မြင် ပါ တယ်
ဒါ ပေ မဲ့ဒီ လို ဗျ
လူ ကျွန် တော် တို့ပု ထု ဇဉ် ဆို တာ က ကိုယ် တိုင် ကို က အမှား တွေ ထပ်
ပြန် တလဲ လဲ လုပ် နေ တာ လေ
ဒီ တော့သူ များ ဘာ အ ကြောင်း နဲ့လှူ လှူ ဘယ် မှာ လှူ လှူပေါ့ ဗျာ လှူ
တာ ကို ၀မ်း မြောက် ပါ တယ်
ကိုယ် မှ မ လုပ် နိုင် တာ .. ဒါ ပြော တာ ပါ ... သိပ် အ ရေး မ ကြီး ဘူး
ထင် လို့အဲ နောက် ပြီး စာ ရိုက် ပျင်း လို့အဲ ဒါ ကို တ ကြောင်း ထဲ
ဖြတ် ချ တာ ... ဆို တာ က ဝေ ဖန် တာ က လွယ် ပါ တယ် .. ကိုယ် တိုင် လုပ်
ဖို့က ခက် သဗျ
အဲ လှူ ရာ မှ နတ် ရွာ သု ဂတိ တို့ ဒီ ဘ ၀ တင် အ ကျိုး လို လို့ဆို ရင်
လော ဘ ရော လာ ပြီး ၀ဋ္ဋ် တ ကု သိုလ် ဖြစ် ကရော
ဒီ တော့အ ကျိုး မ ပေး ဘူး
ရွှေ ဥ ဒေါင်း ကိစ္စ က လဲ သူ က တရား တော် တွေ ခါး ချိုး မ လေ့လာ
တတ် သူ ထံ လဲ သေ ချာ တ ပည့်မ ခံ
သူ့စိတ် အထင် နဲ့ဆော် ထည့်တာ တွေ ပါ လို့အမှတ် မှား မ စိုး လို့ပါ
၁) ၅ပါး သီ လ ဆို တာ မှာ ကြည် လင် သော ယော နိ သော မ ပါ လို့ကို မ ရ တာ
သူ ပြော တဲ့ gentleman spirit က ယော န်ိ သော ဘယ် မှီ မ လဲ
နောက် မု သားကိစ္စ မှာ လဲ ၅ပါး သီ လ သမား က ပြော ကို မ ပြော တာ
gentleman က white lie ဆို ပြော သေး
ဒီ ထက် ဆိုး တာ က အရက် နဲ့မူး ယစ် ဆေး ကိစ္စါး ပြော တာပါ
၂)သူ့ိ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံကြီး က မိုး ကုတ် ဆရာ တော် ဆုံး ဖြတ် ပေးပြီး သား
ဘုရား တ လက် ထက်၂ယောက်၃ယောက်သာ ရနိုင် ဆို တာ ကြီး သူ ဇွတ် တိုး
မိုက် သွား တာ
၃)သောတာပန်အ ရက်သောက်ရတယ်ဆိုတာ ကြီး
စဉ်း စား ကြည့်မဂ် ဥာ ဏ် ရ ပြီးသား လူ က ၅ပါး သီ လ ချိုး ပါ့မလား
အဲ ဆော ရီး ရှည် ကုန် ပြီ မ သိ ဘူး ဆို ပေ မဲ့ကို ကေ ဇက် ရေး လိုက် တာ
နောက် လူ တွေ အ မှတ် လွဲ မ စိုး လို့ပါ ဗျာ
Today, I just hadabusiness lunch with all my bosses andavendor who just came back from Burma. He was there for business trip for BD. During conversion, he starts talking about his experience in Yangon without aware that I amaBurmese. He said that Burmese are innocent, cheap labor and didn't steal but, they do begging only. When he was there, he gives away all his travel kits such as tooth paste, tooth brush, even his bath room shoe. Other people start talking about how good, how patient, how obedient, the Burmese maids are. At the end of the talk, I did mention that I’maBurmese and I’m proud to be one. Later, I went to toilet and cry my heart out. Is there any thing wrong that I was born to be in there?????
I am sorry to hear that you hadadeep cry. it is nothing wrong u was born in Burma, instead you should be proud as beingaBurmese. u know Burma was notapoor country in the past. we also should be proud for our past history that our old generation successfully fought and obtained independence from Bratain. we are not "slave" but we are "master" or "thakin". Burma was during 1960s richer than its neighbor Thailand as well as Rangoon university was "the better" in South East Asia. So we should be proud for our beloved country. But there isaquestion, why Burma is very poor nowadays? if most Burmese can see it and can find out who is responsible for "why Burma is poor", they will have "answer" and soon Burma can free from poor. So, u are among them who have responsibility to find out. You know you should be proud for beingaBurmese girl.
5/30/2007 5:01 PM
ကဒေါင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း said...
5/31/2007 5:09 AM
မမေဆီ စာပို့သူပြောသလို.. ကျွန်မလည်း ဗမာနိုင်ငံသားတွေ ငတ်နေတာမြင်ပြီး ၊ ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်သေးတာတွက် ကိုယ့်ဟာကိုယ် မ၀န့်မရဲ ဖြစ်တယ် ။ တခုခုကတော့ ကြိုးစားနေဆဲပါ ။
နှင်းပြောသလို ကျမဗမာပြည်ပြန်တုန်းက ဗမာပြည်မှာ တောင်းနေကြတာတွေ အများကြီးပဲ ။ အထူးသဖြင့် တိုးရစ်တွေဆီကပေါ့ ။ ဗမာပြည်ကို ရှန်းရှန်းတောက်ဘ၀ကနေ ခုလို ချွတ်ချုံကျအောင် လုပ်တဲ့ အစိုးရနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ကျမတော့ မြင်တယ် ။
ကံ ကံ၏ အကျိုးတရားဆို ဘာသာရေးကကြည့်ပြီး တင်းတိမ်နေကြတယ်ဆိုတာလည်း တွေးစရာအချက်တခုပဲ ။
6/02/2007 3:01 AM